PressReader - Ilanga langeSonto: 2017-08-27 - Imbokodo iyadinga ukwesekana
Imbokodo iyadinga ukwesekana
ISIFINYELELE emaphethelweni manje inyanga yabantu besifazane, uncwaba (August). Kuningi okwenzekile, imigubho yokubabungaza ibihleliwe, isabalele ezweni lonke. Ziningike nezinto ezivelile neziqhubekayo nokuvela ezikhomba ukuthi ziseningi izingqinamba ezibhekene nabantu besifazane.
Ukuhlukumezeka kwabo yinto eyenzeka mihla namalanga kodwa cishe kuningi kakhulu futhi okugcina kungavelanga emphakathini noma kufinyelele kwabomthetho ngenxa yokuthi abanye besifazane baba madolonzima ukubika ngezinye zezigameko zokuhlukunyezwa kwabo.
Ngokombiko westatistics SA wezi-2016, idemographic and Health Survey, oyedwa wesifazane kwabayisihlanu ongaphezu kweminyaka eli-18 useke wabhekana nobunzima bokuhlukunyezwa. Lo mbiko uveza ukuthi ukuhlukumezeka kwabo kwehluka ngokwezinga lempilo nesimo senhlalo. Kuthiwa abane kwabali-10 esebedivosile noma asebehlukanisile babike ukuhlukunyezwa ngokomzimba.
Ukujula kwesimo sokuhlukunyezwa kwabesifazane kujwayeleke ukugqama kakhulu lapho kuba namacala aba ngundabamlonyeni, mhlawumbe asuke ethinta abantu abagqamile emphakathini noma abangosaziwayo kanye nalawo nje aye ethathelwe phezulu.
Amanye alawo macala esingawabala ngelikakarabo Mokoena okusolakala ukuthi washaywa washiswa ngobeyisoka lakhe, kuzoba ngelikareeva Steenkamp owadutshulwa wabulawa yisoka lakhe u-oscar Pistorius.
Akugcini ngalawa macala kodwa kuphinde kube nathinta abesifazane abasuke bethandana nabanye bobulili obufanayo abazithola behlukumezeka emphakathini kuthiwa bayaqondiswa, kanti amacala abo agcina esengena ngaphansi kohlobo lwamacala olubikwa ngokuthi ngama- hate crime ngolukajoji.
Kuphinde kube yizingane zamantombazane ezisencane othola ukuthi zidlwengulwa ngabantu abasondelene nazo. Elinye icala elishiye abaningi beshaqekile ngelendoda yaseChatsworth ebekwe icala lokudlwengula amadodakazi ayo.
Yonke le mibiko yezigameko zokuhlukunyezwa kwabesifazane igcine isuse omkhulu umsindo, kwaqalwa imikhankaso ebigxeka amadoda, kwaqalwa ne- hashtag ethi #Manaretrash, nokuyilapho bekugxekwa khona izenzo zamadoda zokuhlukumeza abesifazane.
Kubuye kwagxekwa nalawo madoda asonga izandla athule uma kuqhubeka izenzo ezinjengalezi, angavikeli abahlukunyezwayo.
Ukuhlukunyezwa kwabesifazane akugcini nje emakhaya kodwa kuhamba kuze kuyoshaya nasezindaweni abasebenzela kuzona, lapho uthola uku- thi owesifazane uphenduka isisulu sokunukubezwa ngokocansi ( sexual harassment).
Okuye kube yinkinga lapha wukuthi abanye baye bangaphumeli obala isikhathi esiningi ngoba besaba ukulahlekelwa wumsebenzi. Okuvelayo wukuthi izimo ezifana nalezi kuba nzima ukuzilandela ngoba ubufakazi kabubi khona ngesinye isikhathi, noma izisulu zithathe isikhathi eside ukuphumela obala. Kanti kokunye abesifazane basuke bengazi ukuthi bayahlukumezeka.
UKUBUKELEKA PHANSI KWABO
Ukungafinyeleli kalula kwabesifazane ezikhundleni eziphezulu kungenye yezinkinga abasabhekene nazo cishe umhlaba wonke.
Uma ekwazile ukuba athole isikhundla esiphezulu noma aphathe abesilisa, kuhlale kunombuzo othi kazi usithole kanjani leso sikhundla, kulibaleke ukuthi nabo bafundile futhi bayakwazi ukuphatha njengoba kwenza ozakwabo besilisa. Kuye kube nemicabango yokuthi ulale nowesilisa ukuze anyuselwe esikhundleni.
Emazweni asathuthuka njengeningizimu Afrika, uthola ukuthi ngisho ukuqhwakela kwabesifazane ezikhundleni eziphezulu kwezepolitiki kunzima ngoba kuthiwa bathambe kakhulu.
Unkk Bathabile Dlamini ongumholi we-african National Congress Women’s League (ANCWL) uke wakhuluma amazwi kwabanye abukeke sengathi aphindisela emuva umzabalazo wesifazane. Ngesikhathi kunengqungquthela yenqubomgomo YE-ANC egoli ngontulikazi (July), kusuke ukukhuluma ngesikhathi kuvela ukuthi kukhona abesilisa abayisi-6 abebeyingxenye yabesifazane abebemele I-ANCWL kule ngqungquthela.
Umlilo uphinde wokhelwa yimpendulo okuthiwa ikhishwe ngunkk Dlamini ngesikhathi ephendula umbuzo kwisunday Times ngala madoda, lapho kuthiwa uthe ngesinye isikhathi bayehluleka wukunqoba kwizinkulumo mpikiswano ngoba baye bazwele, ngakho badinga ongqondongqondo ekuqophisaneni.
Ngokombiko wegrant Thornton Women in Business, yowezi-2017 kuvela ukuthi isibalo sabesifazane abasezikhundleni zobuholi siku28%. Kuvela ukuthi kasikanyuki kangako isibalo sabo uma kuqhathaniswa nesibalo socwaningo olwenziwa eminyakeni eli-13 edlule, ebesihleli ku-26%.
Ngokwalo mbiko kuthiwa sincane kakhulu isibalo sabesifazane abasebenza noma abaphethe emkhakheni wezamandla ( energy sector). Lokhu kuthiwa kwenziwa wukuthi abesifazane abasebasha kabagqugquzelwa ukuba bafundele le mikhakha, yingakho beshoda.
UKUNGAPHATHWA NGENDLELA ELINGANAYO
Ukungaphathwa ngendlela elinganayo ngenye yezingqinamba abasabhekene nayo abesifazane. Kuyaqapheleka ukuthi emiphakathini esiphila kuyo abesifazane basabhekene nemigomo eminingi ethile ababekelwe yona, okufanele baziphathe ngayo, eminye yayo ebukeka ishayisana nesikhathi esiphila kusona manje.
Kunendlela ethile okuye kuthiwe kufanele baziphathe ngayo ngaphansi kwezimo ezithile. Esikhathini esiningi babekelwa imigomo yokuziphatha kusetshenziswa amasiko noma inkolo. Isibonelo nje wukuthi uma owesifazane eshonelwe, kunendlela okuthiwa kumele aziphathe ngayo kodwa kwabesilisa akunamigomo etheni.
Kunezinto okuthi uma zenziwa ngabesifazane zibonakale ziyichilo kodwa uma zenziwa ngabesilisa kube yisimo nje esemukeleka kalula.
Usimphiwe Ngema owake walingisa uthuli emdlalweni kamabonakude umuvhango uke watinyelwa ngenxa yendlela abegqoke ngayo nangendlela aziphathe ngayo emngcwabeni womyeni wakhe udumisani Masilela naye obengumlingisi.
Kuzokhumbuleka ukuthi usimphiwe usukume wakhuluma enkonzweni yesikhumbuzo somyeni wakhe, waphinde wacula, kanjalo nasemngcwabeni wenza okufanayo. Emngcwabeni ubeshaye ingubo emhlophe nomhelane ohambisana nayo. Njengoba sesishilo-ke kube kuningi ukuphawula, abanye bemsola ngokuthi akaziphathanga ngendlela efanele.
Uletshego Zulu oyinkosikazi kagugu Zulu owayengumdlali wezimoto zomjaho naye uke waphoqeleka ukuba azivikele ehlaselwa ngamazwi wumphakathi kuthiwa kwakungamele akhulume emngcwabeni womyeni wakhe.
Babodwa abebethi kufanele ayeke ukulokhu ekhuluma emithonjeni yabezindaba kodwa azile. Kuyenzeka futhi kusuke umsindo ngendlela umuntu wesifazane asuke ebonakala egqoke ngayo, kodwa kwabesilisa akuvamisile ukuba kukhulunywe ngendlela abagqoka ngayo.
Ukuphathwa ngendlela ehlukile kwabesifazane emphakathini kuhamba kuze kuyofika nasemakhaya, lapho uthola ukuthi kunomgomo wokuthi umuntu wesifazane nguyena okufanele abhekane nemisebenzi yasendlini, kuthi owesilisa aphole nje.
Enye inselelo abasabhekene nayo abesifazane yileyo yokungesekani bebodwa, uthole behlaselana bodwa, begxekana. Uma sibheka nje ezindabeni ezike zaba sematheni sizokhumbula ukuthi kugqame ukwehlukana kwabantu besifazane bebodwa odabeni lukaPastor Timothy Omotoso osolwa ngoxhaxha lwamacala okuhlanganisa kuwo awokunukubeza ngokocansi nokuthumba abesifazane.
Kuyaziwa ukuthi kunabesifazame abavuke umbhejazane, belwela umfundisi wabo, kanti namanje basaqhubeka bayalwa ngoba bakholelwa ekutheni akanacala, bafuna adedelwe.
Muva nje ucriselda Dudumashe uzithole esotalatiyeni ngemuva kokuzwakalisa umbono wakhe ngomnu Mduduzi Manana, obeyisekela likangqongqoshe wezemfundo kuzwelonke, okuyimanje ubhekene necala enkantolo lokushaya owesifazane.
Okumdonsele amanzi ngomsele ucriselda wukuphawula ngendlela ekhombisa ukuncoma umnu Manana, emveza njengomuntu ongeyona le nto abantu abayicabangayo ngemuva kwesigameko sokushaya lona wesifazane. Ubemncoma, embeka njengomuntu onobuntu nozwelo, yikho kanye lokho okumqhathe nabantu, kwamenza (ucriselda) wabonakala engazwelani nesisulu ekubeni naye engowesifazane.
Phambilini ngesikhathi umengameli wezwe umnu Jacob Zuma esolwa ngecala lokudlwengula owesifazane ongasekho, obaziwa ngokuthi ngukhwezi, kwagqama abesifazane ababeshaya phansi ngonyawo bethi okanxamalala akanacala yize inkantolo yabe ingakanqumi.
Konke lokhu kungachazwa njengezinkomba zokungesekani kwabantu besifazane bebodwa emphakathini.
Mhlawumbe uqhekeko olukhona kwabesifazane bebodwa yilo oluyokwenza kube wumqansa ukulwisana nezingqinamba ababhekene nazo. Yebo miningi imizamo ekhona yokulwa nezinselelo kodwa mhlawumbe ingashesha ithele izithelo ezibonakalayo uma kunobumbano phakathi kwabo.
Mhlawumbe futhi kungashintsha nendlela abanye besilisa abacabanga ngayo ngabantu besifazane njengoba abanye besebenzisa umbono wokuthi umuntu wesifazane akanamandla, kuba lula ukwenza noma yini ngaye.
Abantu abafana nomkabayi kajama, indlovukazi yamazulu unandi, uyaa Asantewa owayengumkhuzi wempi eghana eyabe ibizwa ngeyaa Asantewa War bangabanye babaholi abatshengise ukuthi izinto ziyenzeka ngisho ngabe ungowesifazane, inqobo nje uma unamandla nobuchule bokuhola.
Inselelo isele kwabesifazane ukuba basukume bafune okungokwabo. tzondi@ilanganews.co.za
ISITHOMBE NGABE: OKAYAFRICA.COM
IZINKULUNGWANE zabantu iningi labo okungamadoda zimashela ukulwa nodlame olubhekiswe kwabesifazane nezingane, epitoli ngonhlaba (May) nonyaka.